माइलेज बढी दिने सुजुकीको नयाँ सेलेरियो नेपाली बजारमा ! कति पर्छ मूल्य ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
माइलेज बढी दिने सुजुकीको नयाँ सेलेरियो नेपाली बजारमा ! कति पर्छ मूल्य ?
नेपाली बजारमा नयाँ फिचर र मूल्य सहित सुजुकीको नयाँ सेलेरियो आउने भएको छ । धेरै माइलेज, उत्कृष्ट प्रफमेन्स भएको यो गाडी एक महिना भित्रै नेपाली बजारमा सार्वजनिक हुने भएको हो।
सुजुकी गाडीको आधिकारिक वितरक सिजी मोटसकोर्पले बुकिङ गर्न चहानेहरुको लागि प्रि–बुकिङ समेत खुलाएर सुजिकीकाे नयाँ सेलेरियो ल्याउने तयारी गरेको हो । नेपाली बजारमा आउने मिति नतोकिए पनि कम्पनीले यो गाडी शुक्रबारदेखि २०२१ मोडलको प्रि बुकिङ समेत खुलाएको छ ।
के के छन बिशेषता ?
सुजुकीले ल्याउन लागेको सेलेरियो उत्कृष्ट फिचर नै माइलेज हो । हार्टेक्ट प्लेटफर्ममा आधारित नयाँ सेलेरियो नेपालकाे सबैभन्दा बढी माइलेज दिने कार हुने समेत कम्पनीको दावी छ । माइलेज बढाउन सो कारमा आइडल स्टार्ट–स्टप फिचर समेत दिइएको छ ।
नयाँ जेनेरेशन सेलेरियोमा १.० लिटर ड्यूलजेट इन्जिन दिइएको छ जुन इन्जिनले अधिकतम ६६ हर्स पावर र ८९ एनएम टर्क प्रदान गर्छ । इन्जिनले २६.६८ किलोमिटर प्रतिलिटरको उच्च माइलेज दिने कम्पनीले जनाएको छ । यसमा ५ स्पीड म्यानुयल र अटोमेटिक गियरबक्स उपलब्ध रहेको छ ।
सेलेरियोको लम्बाई ३६९५ एमएम, चौडाई १६५५ एमएम, उचाई १५५५ एमएम, २४३५ एमएम ह्वीलवेस र १७० एमएम ग्राउन्ड क्लियरेन्स रहेको छ । यसमा ३१३ लिटर क्षमताको बुट स्पेश र ३२ लिटरको इन्धन ट्याङ्की रहेको छ ।
नयाँ सुजुकी सेलेरियोमा अपडेटड हेडल्याम्प, बम्पर र टेलल्याम्प उपलब्ध गराइएको छ भने यसमा एप्पल कार प्ले र एन्ड्रोइड अटो सपोर्ट गर्ने ७ इन्चको टचस्क्रिन इन्फोटेनमेन्ट स्क्रिन लगाएतका बिशेषता पनि उपलब्ध छ ।
यसैगरी यसमा मारुती स्मार्ट प्ले अडियो सिस्टम, आइडल स्टार्ट÷स्टप फङसन, पुश स्टार्ट÷स्टप बटन, सेमी–डिजिटल इन्स्ट्रयुमेन्ट क्लस्टर र मल्टि–स्पोक स्टेयरिङ ह्वील समेत समावेश गरिएको छ । यसको क्यावीन पहिलेको भन्दा प्रिमियम पनि पाउन सकिन्छ । यसको अगाडिकाे चक्कामा डिस्क र पछाडिकाे चक्कामा ड्रम ब्रेक दिइएको छ ।
सुजुकीको नयाँ सेलेरियोको सुरुवाती भेरिएन्टको मूल्य २७ लाख ९९ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । कार ६ रङ सिल्की सिल्भर, सोलिड फायर रेड, आर्कटिक ह्वाइट, क्याफिन ब्राउन, ग्लिस्टेनिङ ग्रे र स्पीडी ब्लूमा उपलब्ध छ । सो कारले नेपाली बजारमा रेनो क्विड, हुन्डाई स्यान्ट्रो र टाटा टियागो जस्ता कारसँग सिधा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
नेपाली बजारमा समेत यस अघिको पुरानो मोडलले निकै राम्रो उपस्थिति जनाएको थियो । नयाँ मोडल भित्रिएपछि यसले इन्ट्री लेभल ह्याचब्याक सेग्मेन्टमा पुन: बजार जमाउने अनुमान गरिएको छ ।